Somaliland oo masaajidyada ku amartay joojinta aadaanka iyo caro ka dhalatay – Warfaafiye:
Ali Mohyadin Jun 8, 2018 0
Xukuumadda Somaliland ayaa awaamiir kasoo saartay aadaanka masaajidyada ee baaqa Salaada, iyadoo masaajidyada ku amartay in genii ahaanba la joojiyo aadaanka iyo salaada taraawiixda iyo taajudka loo isticmaalo cod baahiyaha iyo casharada tafsiirka.
Masaajidyada ku yaal magaalooyinka waaweyn ee Somaliland ayaa gabi ahaanba iska dhago tiray oo aan waxba ka soo qaadin awaamiirtii dhawaan wasaaradda Diinta iyo Awqaafta Somaliland shaacisay ee ku aaddanaa in aan la ogolayn in masaajidadu Makarafoonkooda dhinaca dibadda ay u adeegsadaan baahinta casharrada iyo salaadda Tajahudka si loogu naxariisto dadka xanuunsan, ubadka yar iyo dadka waayeelka ah.
Shacabka magaalooyinka waaweyn ee Somaliland gaar ahaan kuwa Hargeysa ayaa habeen hore ku war helay saqdii dhexe ee 21-ka Ramadaan, Masaajidada oo Sameecadaha dibada u isticmaalaya baahinta codka salaadda Tahajudka iyo waliba wacdi kala duwan oo culimadu masaajidada ka akhriyayeen.
Wasaaradda diinta iyo awqaafta ayaa ku doodaysa in cod baahiyaha masaajidyada ay waxyeelo weyn u gaysatay dadka waaweyn, kuwa xanuusanaya iyo ubadka yaryar oo hurdada ka salala.
Amarkaan ayaa culumada Somaliland u arkaan mid lagu caburinaayo, diinta Islaamka, waxaana ay ka doorbiideen inaysan dheg jalaq u siin awaamiirta xukuumadda Somaliland.
Kim Jung-un oo booqasho ku tegi doona Aqalka cad ee Mareykanka